महिला कण्डम कसरि प्रयोग गर्ने ?? श्रीमान श्रीमती ले थाहा पाउनै पर्ने कुरा ?? – Saptarangi Nepal
२०७७ चैत्र ८, आईतवार ०९:०६ गते
कण्डम परिवार नियोजन को एक परिवार नियोजनको अस्थायी साधन हो | सामान्यतया कण्डम भन्नाले पुरुस कण्डम लाई नै चिनिन्छ | तर अहिले आएर महिला कण्डम पनि निकै प्रचलनमा आएको छ |
महिला कण्डम महिलाले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजन को एक परिवार नियोजनको अस्थायी साधन । यसलाई फेमिडोम भनेर पनि चिनिन्छ । यसको प्रयोग एकदमै सरल र सजिलो छ यौन सम्पर्कको समयमा महिलाले यो योनि भित्र लगाउनु पर्ने हुन्छ । महिला कण्डम गुदा यौन सम्पर्कको समयमा ग्रहणकर्ता साझेदार द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
महिना कण्डम प्रयोग महिलाले गरेमा पुरुषले कुनैपनि साधन प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन ।महिला कन्डमले पनि पुरुष कन्डमले जस्तै गर्भवती हुन रोक्नका साथै यौनजन्य रोगहरूबाट र एच.आई.भी. सङ्क्रमण हुनबाट बचाउदछ । दम्पतीले बच्चा जन्माउन चाहेमा यसको प्रयोग गर्न छाड्ने बित्तिकै बच्चा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस कन्डममा कुनै हर्मोन नहुने हुदा यसले शरीरमा कुनै असर पार्दैन । नेपालमा महिला कन्डम निजी औषधी पसलहरूमा मात्र उपलब्ध छ ।
यस फेमिडममा दुई वटा रिङ्गहरु हुन्छन् जसमा खुम्चिने पट्टिको रिङ्गलाई यौनी भित्र राख्नु पर्दछ। सामान्य पुरुष कण्डमको तुलनामा यसको मुल्य धेरै पर्ने भएकाले यो विकसित देशहरूमा मात्र बढि प्रयोगमा आएको छ ।
पुरुष कण्डम भन्दा बनाउन समय र मेहनत लाग्ने हुँदा केही महङ्गो पनि हुन्छ । महङ्गो र झन्झटको रुपमा नसम्झेर सुरक्षित उपायका रुपमा यसको प्रयोग गर्न सके नचाहाँदा/नचाँहादै बच्चा जन्मने खतरा कम हुन्छ ।
पछिल्लो समय पुरुष कण्डम प्रयोगले महिला पुरुषबीच यौन सन्तुष्टिको विषयलाई लिएर तिक्तता उत्पन्न भएको गुनासाहरु आइरहँदा महिला कण्डम उपयुक्त हुन सक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । बजारमा महिला कन्डम फेमिडोम, भी—अमोर ब्रान्डमा उपलब्ध छ ।
एसईई को परीक्षा आफुले पढेको स्कुलमा नै गर्ने शिक्षा मन्त्रालय को निर्णय
यति गरेबाट देशभरी का सबै बिद्यालय बन्द ( थप पद्नुहोस )